Ingathi usebenzisa inguqulelo endalana yeFirefox.
Ungqamaniso yenye nje yeefitsha eziphakamileyo oyakuyifumana kuphela kwi-Firefox.
Ulungile, Seta, Sayinka
Usayinelwe ukungena nokulungela ukufikelela yakho iFirefox naphina, naninina.
Phatha iWebhu yakho apho ukhoyo
Sayinka iFirefox naninina ufuna ukufikelela kwiibhukhimakhi, iiphasiwedi, ithebhu nangaphezulu nakwesiphi ismartphone, ithablet okanye ikhompuyutha.
Suka edesikeni uye esofeni ungakhange utsibe bhithi. Fikelela kwiithebhu zakho ezivulekileyo kwismartphone sakho, okanye uqhubeleke ubhrawuza iibhukhimakhi zakho kanye kwithablet yakho.
Hlala uqagamshelana nazo zonke iinkcukacha zakho ezibalulekileyo. Sayinka iphasiwedi neebhukhimakhi onokufuna ukufikelela kuzo naninina. Njenge Firefox, ikhuselekile kangangoko.
Zigcine usemgceni nesayithi zakho ozithandayo, okanye gqiba elabali uliqalileyo ekhaya - naphina uyakhona. NgeSayinki, akuzange kubelula kangaka.
Dawnlowuda iBhrawza yeWebhu yeFirefox
IBhrawza yeDesktopu yeMac, iWindows, iLinux
Ibhrawza yeMobhayili yeAndroid
IBhrawza yeMobhayili ye-iOS
Iinxalenye zesi siqulatho zi- ©1998–2017 ziyilwe ngabanikeli be-mozilla.org. Umba ofumanekayo phantsi kwelayisenisi ye-Creative Commons.
Ulwimi Acholi Afrikaans aragonés عربي অসমীয়া Asturianu Azərbaycanca nahuatl sierra norte Puebla Беларуская Български বাংলা (বাংলাদেশ) বাংলা (ভারত) Brezhoneg Bosanski Català Maya Kaqchikel Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Dolnoserbšćina Ελληνικά English (British) English Esperanto Español (de Argentina) Español (de Chile) Español (de España) Español (de México) Eesti keel Euskara فارسی Pulaar-Fulfulde suomi Français Frysk Gaeilge Gàidhlig Galego Avañe'ẽ ગુજરાતી (ભારત) हिन्दी (भारत) Hrvatski Hornjoserbsce magyar Հայերեն Bahasa Indonesia íslenska Italiano 日本語 ქართული Taqbaylit Қазақ ಕನ್ನಡ 한국어 Ligure Lietuvių Latviešu Македонски Melayu မြန်မာဘာသာ Norsk bokmål Nederlands Norsk nynorsk occitan (lengadocian) ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ) Polski Português (do Brasil) Português (Europeu) rumantsch Română Русский slovenčina Slovenščina Soŋay Shqip Српски Svenska தமிழ் తెలుగు ไทย Türkçe Triqui Українська اُردو Oʻzbek tili Tiếng Việt isiXhosa 中文 (简体) 正體中文 (繁體)